अर्को शताब्दीमा इन्टरनेट कस्तो देखिन्छ? | Martech Zone
अर्को शताब्दीमा इन्टरनेट कस्तो देखिन्छ?
आइतबार, जुलाई 13, 2014 शनिबार, जुलाई २१, २०१। Douglas Karr
मेरा बच्चाहरू एक युगमा हुर्कदैछन् भन्ने सोच्न जहाँ इन्टरनेट सधैँ यहाँ थियो एकदम अचम्मको छ। हाम्रो घरहरूमा दर्जनौं उपकरणहरू छन् जुन जडान गरिएको, रेकर्डिंग, र हामीलाई दैनिक नेभिगेट गर्न मद्दत पुर्‍याउने तथ्यलाई हामी सरल डायल-अपबाट सर्‍यौं भन्ने तथ्य अविश्वसनीय छ। अहिलेबाट १०० बर्ष सोच्नु मेरो दृष्टिकोण भन्दा टाढा हो। मोबाइलको विस्फोटनको साथ र हाम्रो उपकरणहरू अधिक र अधिक शक्तिशाली हुँदै, म केवल अनुमान गर्न सक्छु कि प्रदर्शनहरू जताततै हुनेछ र हाम्रो मोबाइल उपकरणहरू सबै हामी क्लाउडबाट टाढा भएका हुनेछौं।
कुनै श doubt्का छैन सबै कुरा जडान र अनुकूलित हुनेछ। हाम्रो फ्रिजहरू स्वचालित रूपमा हाम्रो खाना टस गर्नेछन् र सबै कुरा बुझाइनेछन्, नुस्खा द्वारा, हाम्रो योजनाबद्ध खानाको लागि। हाम्रो कार आफैं ड्राइभि driving हुनेछ। म केवल कल्पना गर्न सक्दछु कि हामीहरु मध्ये कोही त पूर्ण भेरि be्ग गर्नको लागि स्वयमसेवा पनि प्राप्त गर्न सक्दछौं - सायद उपकरणहरु जुन हाम्रो भिजुअल र अडियो रेकर्ड गर्न को लागी आवश्यक छ। हामीसँग जहाँ भए पनि हाम्रो अनुप्रयोगहरू वा सन्देश पठाउनको लागि केही प्रकारको प्रोजेक्शन उपकरण हुनेछ - अडियो र भिडियो स्ट्रिमि withको साथमा। सायद फोल्ड-अप वा रोल्ड-अप डिस्प्लेहरू हाम्रो ब्याकप्याक्समा हुनेछन्।
मलाई लाग्छ हामीसंग नराम्रो पनि हुनेछ। A कालो इन्टरनेट यो अज्ञात मानवता को एकदम डराउने कुरा हो तपाईलाई आँखाको शाब्दिक पलकमा तपाईलाई चाहिने केहि प्रदान गर्न प्रतीक्षा गरिरहेको छ। ठीक छ ... म अब यस बारेमा सोच्न चाहन्न।
टैग: 100 वर्ष201421102111211221132114शताब्दीइन्टरनेटइन्टरनेट १०० बर्षप्रविधि
मार्केटिंगको भविष्यको लागि रोडमेप